LG G5 အတွက် Miui V2 ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်မည်သို့ Flash လုပ်ရမည်နည်း Androidsis
သငျသညျပျင်းစရာသူတွေကိုငြီးငွေ့လျှင် LG G2 အတွက်တရားဝင် LG ROM များ သူတို့ပေးသောရှုထောင့်များဖြစ်သော Stock Roms နှင့် AOSP Roms နှစ်ခုလုံးသည်သင်ရှာဖွေနေသောရာထူးဖြစ်သည်။
လာမည့်ပို့စ်တွင် XDA မှလူများအားကျေးဇူးတင်ပါကသင်၏ LG G2 ကို Xiaomi terminal တစ်ခုအဖြစ်တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်မည်သို့ပြောင်းလဲပစ်ရမည်၊ LG G5 အတွက်စပိန်ဘာသာဖြင့် Rom Miui V2 ကိုအသုံးပြုထားသည်.
1 စပိန်ဘာသာဖြင့် Miui V5 က LG G2 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းသလဲ။
2 LG G5 အတွက် Miui V2 ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် flash လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များ
3 LG G5 အတွက် Rom Miui V2 ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
စပိန်ဘာသာဖြင့် Miui V5 က LG G2 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းသလဲ။
Miui V5 များစွာသောတ ဦး တည်းအားဖြင့်စဉ်းစားသည် ယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံး roms ၎င်း၏ရသဗေဒသည် Android ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သောအရှိဆုံးရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြင်ကရှိပါတယ် ကိုယ်ပိုင် applications များနှင့် tools များ Android အတွေ့အကြုံသည်သာမန် Android interface ထက်အနည်းငယ်သာယာပြီးရိုးရှင်းပါသည်။
ဒီနေရာမှာတချို့ screenshots များ ကနေယူ ငါ့ကိုယ်ပိုင် LG G2 မော်ဒယ် D802LG G5 အတွက် Miui V2 ပမာဏကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်သင်သိရှိနိုင်သည်။
LG G5 အတွက် Miui V2 ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် flash လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များ
များအတွက်လိုအပ်ချက်များ ဒီ Rom ကို flash လုပ်ပါ အခြေခံအားဖြင့်အမြဲတမ်းအတူတူဖြစ်ကြပြီးတစ် ဦး ရှိခြင်းကန့်သတ်ထားပါသည် rooted terminal သူနှင့်အတူ ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူထည့်သွင်းပြီး နှင့်ရရှိနိုင်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမှ updated ။
ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရမည် backup EFS ဖိုင်တွဲ, အမှု၌ယင်ကောင်! ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system တစ်ခုလုံး၏ nandroid backup အမှု၌လုပ်ငန်းလည်ပတ်တစ်ခုခုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျရှုံးသင့်ပါတယ်။ ဘက်ထရီအား ၁၀၀ x ၁၀၀ နှင့်အားသွင်းရမည်။ Terminal ၏ချိန်ညှိချက်များမှ USB debugging ကို enable လုပ်ရမည်။
LG G5 အတွက် Rom Miui V2 ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
အားလုံး၏ပထမ ဦး ဆုံး download လုပ်ပါလိမ့်မည် Baseband KitKat ဒီတူညီတဲ့ link ကိုမှ နှင့် LG G5 အတွက်စပိန်ဘာသာဖြင့် Rom Miui V2 ကိုအသုံးပြုထားသည် ဒီကနေအခြားနောက်ဆုံးရရှိနိုင်နောက်ဆုံး version ဒီကနေ Supersu။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကို LG G2 ထဲသို့ internal memory ၏အမြစ်တွင်မပါဘဲ unzipping မယူဘဲကူးယူပြီးမည်သည့်အရာများကိုမျှမဖြတ်ဘဲကျွန်ုပ်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါမည်။
cache ကို partition ကိုသုတ်။
အဆင့်မြင့် / Dalvik cache ကိုရှင်းလင်းပါ။
mount နှင့်သိုလှောင်မှုနှင့်ပုံစံစနစ်၊ ဒေတာနှင့် cache ။
sdcard မှ zip ကို Install လုပ်ပါ။
Baseband KK ၏ zip ကိုရွေးပြီး install လုပ်ပါ။
နောက်တဖန် zip ကိုရွေးပါ။ Rom မှ zip ကိုရွေးပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် installer ဖွင့်လာလိမ့်မည် အနံ့ Installer ဘယ်မှာကျနော်တို့ရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် Rom သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal model နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဂူဂဲလ်၏မူလအပလီကေးရှင်းအထုပ်ကိုရွေးခြင်းသို့မဟုတ် Gapps ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
အဆုံးမှာသာရှိလိမ့်မည် terminal ကို restart လုပ်ပါ, system ကို restart လုပ်ပြီးတာနဲ့ငါးမိနစ်ခန့်ကြာအောင်ပြန်ပိတ်ပါ Recovery ကိုထပ်မံပြီး Supersu zip ကို flash လုပ်ပါ မည်သည့် Wipe အမျိုးအစားမျိုးနှင့်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာများမလိုအပ်ဘဲ zo from sdcard ကိုနောက်ထပ် ado မသုံးပဲ Install လုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G5 အတွက်စပိန်ဘာသာဖြင့် Miui V2 ကိုလက်တွေ့တွင်တွေ့ရသည်
မေးခွန်းမှာ .. ၎င်းသည်ဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်နှစ်ဆထိပုတ်ပါသလား။
နှစ်ချက်ထိပုတ်ပါက terminal ကိုဖွင့်ရန်နှင့်နိုးရန်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည်၊ နောက်တစ်ခုကတရားဝင်တရားဝင် LG Rom မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည် LG ၏ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သော Quick slide, Quick Memo စသည်တို့ကိုအထောက်အပံ့မပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Pablomar ၄ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားမှာဘာအမှားတွေရှိလား။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် Roms အမြောက်အမြားကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ သူတို့မှာကင်မရာ (သို့) မူရင်းသို့ပြောင်းလဲရန်ပျက်ကွက်သည့်အရာတစ်ခုခုရှိသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် OTA မှတစ်ဆင့် update လုပ်ပါသလား။ ငါ့မှာ Nexus4ရှိတယ်။ တစ်ခုရှိသေးတယ်။ အခုငါ CM11 နဲ့အတူရှိနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေအရမ်းထူးဆန်းတယ်။ M7 ကိုစောင့်နေတယ်။
သက်ဆိုင်ရာစပိန်ဘာသာပြန်ခြင်းမပါဘဲနောက်ဆုံးအပတ်စဉ်ဗားရှင်းကို install လုပ်ရန်အန္တရာယ်ရှိသော်လည်း OTA မှတစ်ဆင့် update များသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သင့်သည်။
Michael Kno (@michael_panama) ဟုသူကပြောသည်
G2 D805 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလား
Michael kno (@michael_panama) ကိုစာပြန်ပါ
ငါ့မှာအာဂျင်တီးနားက d806 မော်ဒယ်ရှိတယ်၊ အဲဒါ rom နဲ့လိုက်ဖက်သလား။
လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ ဤဗားရှင်းသည် D802 မော်ဒယ်နှင့်ကိုရီးယားမော်ဒယ်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်မှာ F320 သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာ။
ဂျပန်မော်ဒယ် g2 L01F အတွက် ?? ဒီဖုန်းကို Docomo လို့ခေါ်ပြီးဂျပန်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီ NTTDocomo ။
ဟဲလို၊ ဖရန်စစ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ClodyG3 V2 သို့မဟုတ် Miui ဖြစ်ပါကမည်သည့် rom သည်ပိုကောင်းကြောင်းနှင့် D805 နှင့်လိုက်ဖက်ပါကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Google Now အတွက်ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်ကဒ်အသစ်